Huawei na-ewute FedEx maka mbupu ebugharị Gam akporosis
Huawei tụgharịrị mmekọrịta ya na FedEx n'ihi ntụgharị dị iche iche nke mbufe
N'etiti Ọnọdụ dị egwu n'etiti United States na Huawei, n'ihi mmekọrịta ụlọ ọrụ na gọọmentị China nwere ike ịnagide ihe nzuzo na ọgụgụ isi dị nro, ụlọ ọrụ ahụ emetụtala nke ọma na ụlọ ọrụ ama ama, nakwa na netwọk na telivishọn.
Ugbu a, FedEx yiri ka ọ na-esonye na pati ahụ, ọ bụghị site na Huawei. Companylọ ọrụ mbupu nwere Huawei gbanwere mbupu ahịa na mberede, ihe yiri ka ọ bụghị ihe mberede, ma ọ bụrụ na anyị echebara egwuregwu ndị gọọmentị America na-eme megide ndị na-emepụta China. Agbanyeghị, ọ nwere ike bụrụ naanị nke ahụ, mmeghe. Mgbe nke a gasịrị, FedEx rịọrọ mgbaghara.
Huawei na-ewute FedEx maka mbupu ntụgharị
Dị ka ọ tụrụ anya ya, Huawei ewereghị ya dị ka obere ihe, ma obere n'ihi nsogbu ọ na-agabiga, na o mebiela nke ọma ka ọ ghara ikwe ka ọ gaa n'ihu na-arụ ọrụ nwayọ dịka ọ na-eme. (Chọpụta: Huawei ka nwere ohere iji zọpụta onwe ya?)
Na nkọwa, ọnụọgụ anọ sitere na Huawei nwere mkpokọta ebugharị ma ọ bụ nwaa ibugharị na United States, nke iwe nke a na-echereghị.
Mbupu abụọ sitere n'aka ndị na-eweta Huawei na Japan na-aga alaka ya na China, ebe ndị nke ọzọ si na onye na-ebubata ngwa ahịa na Vietnam wee na-aga alaka ụlọ ọrụ na Asia.
E bufere ụzọ mbubata si Japan, na-enweghị ikike sitere na Huawei ma ọ bụ onye zitere ya, na United States. A nwara mbupu abụọ ndị ọzọ sitere na Vietnam ka ịbaga United States..
FedEx ekwuola na ebu ndị a "ezighi ezi site na ndudue" ma na emeghị ha dịka iwu nke ndị ọzọ.
FedEx kwuru na "Nke a bụ nsogbu dịpụrụ adịpụ ma pere mpe na ngwugwu pere mpe." Reuters, na-ezo aka na mbupu anọ metụtara. Ọ gbakwụnyere, "Anyị maara mbupu niile a na-ekwu okwu yana anyị na ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ ịlaghachi ngwugwu n'aka ha."
Multgbọ njem mba dị iche iche ebipụtala akwụkwọ ozi mgbaghara na Weibo maka ihe mere. Kwughachiri na nke a bụ, na, na mbupu njehie na na ọ dịghị ndị ọzọ metụtara.
Agbanyeghị, na-atụle ọgba aghara na-eto eto n'etiti ndị na-achị ụwa abụọ (US na China), Huawei kwuru ozugbo, ọ bụghịkwa ọ joyụ banyere ya. Na nkwupụta nye Reuters, onye ọnụ na-ekwuru Huawei kwuru, sị:
“Ahụmahụ ndị na-adịbeghị anya ebe akwụkwọ azụmahịa ndị dị mkpa zigara site na FedEx ezigaraghị ebe ha na-aga ma gbanwee ya ma ọ bụ rịọ ka e bugharịa ya na FedEx na United States, na-emebi obi ike anyị. Ugbu a, anyị ga-enyocha ntinye akwụkwọ anyị na nkwado nke lọjistik ka ihe si na ihe ndị a pụta. "
Huawei gosikwara na mbupu ndị ahụ nwere naanị akwụkwọ. Yabụ, enweghị teknụzụ metụtara.
Oge nke njehie FedEx a enweghị ike ịbịa n'oge kachasị njọ. Mgbe nke a gasịrị, anyị ga-echere ma hụ ma Huawei ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na FedEx n'ọdịnihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei tụgharịrị mmekọrịta ya na FedEx n'ihi ntụgharị dị iche iche nke mbufe
Bruno Gutierrez Rodriguez dijo
mba mamen, iberibe fedex ma oburu na ebupu ya ebuga ya ozo ka ezigara ha United States, o nweghi ihe huru chsm fedex na trump (ezi ezi)
Zaghachi Bruno Gutierrez Rodriguez
Redmi 7A na-ekpughe ọnụahịa ya
TSMC bidoro imepụta igwe mmadụ nke ọgbọ abụọ 7nm + mgbawa